Nchịkọta Web: Ezi na Bad Bad - Nkwupụta ihe omimi
Bọọlụ na-anọchite anya 55 pasent nke okporo ụzọ weebụ niile. Ọ pụtara na ọtụtụ n'ime ndị na ebe nrụọrụ weebụ gị na-abịa site na bomb Internet kama mmadụ. Akpụ bụ ngwa software nke na-ahụ maka ọrụ na-arụ ọrụ akpaaka na ụwa dijitalụ. Ndị ọkpụkpụ ahụ na-arụ ọrụ dị iche iche n'oge dị elu ma bụrụ ndị na-adịghị mma site n'aka ụmụ mmadụ. Ha na-ahụ maka obere ọrụ anyị na-ejikarị eme ihe, gụnyere njikwa nyocha ọchụchọ, nlekota oru nlekọta ahụike, nyochaa ọsọ ya, ike API, na ịbata ọdịnaya weebụ. A na-ejikwa bọtịnụ mee ihe iji chekwaa nchedo nchedo ma nyochaa ebe nrụọrụ gị iji chọpụta ebe dị mma, na-edozi ha ozugbo - gas ejector design calculation.
Ịtụle ọdịiche dị n'etiti ezi na bọọlụ ọjọọ:
A pụrụ ịkụnye bots na ụzọ abụọ dị iche iche, ezigbo bọọlụ, na bọọlụ ọjọọ. Ezi bọọlụ na-aga na saịtị gị ma nyere aka na engines ịchọpụta ibe weebụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, Googlebot na-achọ ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na nsonaazụ Google ma na-enyere aka ịchọpụta ibe weebụ ọhụrụ na ịntanetị. Ọ na-eji algorithms iji nyochaa nke blọọgụ ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ịkwanye, ugboro ole ka a ga-arụ ọrụ, na ole peeji ole ka edepụtara aha. Ndị bọọ ọjọọ na-arụ ọrụ maka ịme ihe arụ, tinyere nchịkọta weebụ, okwu spam , na ọgụ DDoS. Ha na-anọchite anya pasent 30 nke okporo ụzọ nile na Intanet..Ndị na-eme egwuregwu na-eme ihe ọjọọ bots ma na-eme ọtụtụ ihe omume obi. Ha na-ekpuchi ọtụtụ nde ijeri na ibe weebụ ma na-ezube izuru ohi ma ọ bụ kpochapụ ọdịnaya n'enweghị iwu. Ha na-erekwa bandwit ma na-achọ plugins na ngwanrọ nwere ike iji banye na ebe nrụọrụ weebụ na ọdụ data gị.
Gini bu nsogbu?
Na-emekarị, engines ọchụchọ na-ele ihe ndị a kpochapụrụ dị ka ọdịnaya abụọ. Ọ na-emerụ njirimara gị na search engines ma nyochaa ga-ejide gị ntanetị RSS iji nweta ma bidoghachi ọdịnaya gị. Ha na-eji usoro a enweta ego buru ibu. N'ụzọ dị mwute, engines na-achọpụtabeghị usoro ọ bụla iji kpochapụ bots ọjọọ. Ọ pụtara na ọ bụrụ na etinyere ọdịnaya gị ma kpoo ya mgbe niile, ọkwa nke saịtị gị na-abawanye na izu ole na ole. Ụlọ ọrụ nyocha ahụ na-akwado saịtị ndị nwere ọdịnaya abụọ, ha enweghịkwa ike ịmata ebe nrụọrụ weebụ mbụ bipụtara otu ọdịnaya.
Ọ bụghị nchịkọta weebụ ọ bụla dị njọ
Anyị ga-ekwenye na nchịcha adịghị abụ ihe na-emerụ ma ọ bụ ihe ọjọọ. Ọ bara uru maka ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ mgbe ha chọrọ ịkọ data ahụ ka ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee. Dịka ọmụmaatụ, saịtị gọọmentị na njem nleta na-eweta data bara uru maka ọha na eze. Ụdị data a na-adịkarị karịa API, a na-ejikwa ndị na-enyocha akwụkwọ iji nakọta data a. Ma ọ bụghị, ọ na-emerụ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọbụna mgbe ị nyochara ọdịnaya a, ọ gaghị emebi aha nke azụmahịa gị n'ịntanetị.
Ihe atụ ọzọ nke nchacha na nke ziri ezi bụ nchịkọta nchịkọta dịka akwụkwọ ntinye akwụkwọ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ, saịtị ntaneti egwu egwu, na nchịkọta akụkọ. Ndị bọọlụ na-ebu maka ikesa ọdịnaya nke ibe weebụ a na-enweta data site na API ma wepụ ya dị ka ntụziaka gị. Ha na-achọ ịkwọ ụgbọala na wepụ ozi maka webmasters na mmemme.